Maninona no mila ny Nicotinamide Mononukleotida (NMN)
Na dia tsy azo ihodivirana aza ny fahanterana, misy ny fahatsinjovana ny fiverenana Nikotinamide Mononucleotide (NMN). Ny miaina amin'ny fahanterana masaka dia nofinofin'ny olon-drehetra ary misy fitambarana toy ny NMN izay manampy antsika hahatratra ilay nofy.
Fantatro fa mety manontany tena ianao hoe ahoana no ifandraisan'ity fitambarana ity amin'ny fahanterana. Ary tazomy ny basy fa ho entiko mamaky ny tombotsoan'ny mononucleotide nikotinamida ianao.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) dia mpialoha lalana NAD +. NAD + dia biomarker manan-danja ao amin'ny sela zanak'olombelona. Rehefa mihamahazo taona isika dia mihena io simika io vokatry ny fiasan-tsiry maromaro. Tsy vitan'izany fa ny tahan'ny fanjifana dia mifanitsy tsy miorina amin'ny ambaratonga famokarana.
Ny zavatra iray lehibe manamarika dia ny: tsy toy ny ankamaroan'ny fitsaboana manohitra ny fahanterana izay mamela anao amin'ny soritr'aretina tsy voafehy. Vokatry ny lafiny NMN no manarakaraka. Avelao aho hanazava kely momba ny fiantraikan'ny NMN amin'ny fiainanao.
Inona no atao hoe Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Nicotinamide Mononucleotide (Nmn)1094-61-7) avy amin'ny niacin. Izy io dia vokatra iray avy amin'ny fihetsika teo amin'ny ribôtika nicotinamide sy ny vondrona phosphate. Ny fitambarana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny biosynthesis an'ny NAD + (nikotinamide adenine dinucleotide), izay tena manan-danja indrindra amin'ny asan'ny biokimika sela.
Ao amin'ny synthesis of NAD +, ny vovo-dronono Nicotinamide Mononucleotide dia miasa amin'ny substrate ho an'ny monotucleamide monotucleamide adenlyltransferase, izay anzima tompon'andraikitra amin'ny famadihana azy io ho NAD +.
NMN dia isan'ireo loharano lehibe amin'ny angovo sela ao anaty vatan'olombelona. Satria izy io no mpialoha lalana ny NAD +, ny fihenan'ny fiatoana iray dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fiatraikany.
Tao anatin'ny fandinihana preslinical vao haingana, Nicotinamide Mononucleotide dia nanamafy fa ny fototra ao anatin'ny sehatry ny fitsaboana. Ny fahatapahan-kevitra iray lehibe dia ny fahatsapana ny anjara asan'ny sisan-javatra amin'ny famerenana ny senescence ary ny fitazonana ny fizotran'ny fahanterana.
Vao tsy ela akory izay, misy ny fikarohana mahavariana momba ny fitantanana homamiadana nikotinamide mononucleotide.
Inona no sakafo hohanin'ny monotényotidaide (NMN)?
Wisepower dia manana voka-pamokarana lehibe amin'ny vovoka NMN sy NR,
fahafaha-mamokatra isam-bolana hatramin'ny 2,000KG.
Inona avy no tombony azo avy amin'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ekenao amiko fa ny fahanterana sy ny volo fotsy dia mitovy amin'ny fahendrena. Na izany aza, vetivety ihany ny fifaliana an'ity maxim ity raha vao manomboka fotoana zokiolona ianao. Rehefa mandroso taona maro isika dia miova hoan'ny aretina ny vatantsika.
Ny fahanterana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiasan'ny sela. Ohatra, ny haavon'ny NAD + sy ny Nicotinamide Mononukleotida dia miverina mandritra ny taona volamena. Na dia mbola manaingo ny simika aza ny vatana, ny haavon'ny fanjifana dia mihoatra lavitra noho ny haavon'ny fiterahana indray.
Raha misy ny fahasimban'ny ADN, ny NAD + dia manetsika ny PARP1, proteinina fanamboarana ny ADN, hamerina ireo organelika voakasik'izany.
Ny fihenan'ny NMN dia misy fiantraikany amin'ny haavon'ny NAD + ary avy eo mitarika ny fihenan'ny famokarana angovo amin'ny mitochondria.
Ny fikarohana natao nataon'ny Dr. Sinclair, mpahay siansa avy amin'ny Havard University, dia manamafy ny fahombiazan'ny famenon-tsaina monotucleamide nikotinamide amin'ny fampihenana ny fahanterana. Niaiky ilay manam-pahaizana fa izy sy ny dadany no mandray ny fanampin-tsakafo ary azo antoka fa manatsara ny fitadidy izany ary manamafy ny sain'izy ireo.
Fitsaboana ny diabeta II
Ny fihenan'ny haavon'ny adineine dinucleotide nicotinamide dia mety mitarika ny diabeta karazana II.
Ny fitantanana Nicotinamide Mononucleotide dia hanatsara ny tsy fandeferana glucose sy ny fahatsapana insuline amin'ny marary diabeta. Ankoatr'izay dia nanatsoaka hevitra ny mpandinika génetika sasany fa ny fitsaboana dia mamadika ny fitenin'ny fototarazo vokatry ny sakafo matavy be.
Rehefa latsaka ny haavon'ny dinônototidônina adenine nikôtinamidia, dia tandindomin-doza ny toe-tsaina.
Ny fitantanana ny NMN dia manatsara ny haben'ny NAD +, noho izany miaro ny atidoha amin'ny fahasimbana. Amin'ny fomba fohy, dia manasoa ny fiasa sy fahatsiarovan-tena sy ny fahatsiarovana i Nikotinamide Mononucleotide.
Noho io antony io, ny fitsaboana dia ampiasaina amin'ny fitantanana ny aretin'i Alzheimer, ny aretin'i Parkinson, dementia.
Ny vakiteny fandalinana sasany ho an'ny etsy ambony tombony monotinamide mononukleotida amin'ny fanamafisana fa ny fanampim-bidy mahomby dia mifandraika amin'ny fahasimban'ny intracerebral. Rehefa nanatanteraka ny fatra amin'ny totozy taloha ny mpikaroka, dia nitombo ny lohahevitra tamin'ny fananganana famokarana intracerebral NAD +. Vokatr'izany, dia nisy ny fampihenana teo noho ny fivontosan'ny tazo isemika sy ny aretin'ny neurological.
Ny haavon'ny NMN optimum ao amin'ny vatana dia midika hoe fitomboan'ny NAD +, izay mifehy ny asan'ny metabolika angovo, ny fanamboarana ADN, ary ny valin'ny adin-tsaina. Koa satria Nicotinamide Mononucleotide misy fiantraikany mivantana amin'ny metabolisma, ny tsy fahampiany dia miteraka toe-javatra metabolika marobe toa ny hatavezina, diabeta, aty matavy ary dislipidemia.
Raha misy ny tsy fandeferana ny glucose, dia mitombo ny dingana NMN hanamafisana ny metabolism.
Ny fikarohana dia nanamafy fa mety ho very hatramin'ny 10% amin'ny lanjanao ianao raha maka NMN. Raha nametraka izany ny Dr. Sinclair, ny fiantraikan'ny fatran'ny NMN tokana ho an'ny olombelona dia mitovy amin'ny fandehanana amin'ny elo.
Manohana ny fahatanorana
Aza hadino ny momba ny kitapom-batsy taonina sy fandidiana tarehy izay mamela anao amin'ny sakamalaho tsy voafehy.
Araka ny nametrahanny mpahay siansa azy dia efa antitra amin'ny aretintsika isika Amin'ity fanamarihana ity, azonao atao ny mihena fa ny famerenana ny atin'ny vida sy ny fihenan'ny lalan-drantsika dia hitondra ny fitaka mandritra ny fiainantsika.
Ny tena manasaraka ny fahatanorana amin'ny fahanterana dia ny hery sy fiaretana hozatra. Na dia mihatsara aza ireo toetra rehetra ireo amin'ny fanazaran-tena mahazatra, ny senescence dia manohitra ny lozam-pifamoivoizana ary ny ozatra hozatra dia mihamalemy raha mihena ny rà ao anatin'ireo rafitra ireo.
Avelao aho hanazava avy amin'ny fomba fijery siansa. Rehefa mihena ny sela endothelialan'ny olombelona ao anaty proteinina Sirtuin1, dia hianjera amin'ny rà miakatra ny rà. Tokony ho azonao tsara fa ny NMN no mpanitsy ny SIRT1. Noho izany, ny fitantanana ity suplemento ity dia hampihetsika ny sirtuin-signaling, izay hiteraka capillaries vaovao hamatsy oksizenina sy otrikaina ho an'ny hozatra sy taova hafa.
Ka inona izany rehetra izany momba ny nicotinamide mononukleotida vs ribosaida?
Eny, samy mpialoha lalana ny NAD + ireo.
Ny fijerena ireo firafitry ny simika dia hilazana anao fa ny NMN dia manana habe molazambola lehibe kokoa noho ny NR. Noho izany, nikotinamide riboside afaka manamboatra izany amin'ny vatan'olombelona raha tsy mila manapotika ny molekony manontolo.
Na dia izany aza, misy ny mason-tsivana fanantenana rehefa nisy ny fanadihadiana vao haingana nanamafy fa misy transporter mistery izay mamela ny zavatra simika mandalo ny fizotry ny fandevonan-kanina. Ny fandalinana taloha dia nanala izany mety izany mandra-pahitan'ny mpahay siansa sasany ny proteinina Scl12a8, izay manamora ny fiovam-po amin'ny NMN amin'ny nicotinamide adenine dinucleotide.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mahita ny vidin'ny monotucleamide nicotinamide ho somary avo kokoa noho ny an'ny mpiara-miasa aminy riboside.
Ny fikarohana Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Na dia betsaka aza ny fikarohana fikarohana sy ny momba izany Famerenam-bola fanampiny NMN hatramin'ny nahitany azy tamin'ny 1963, azafady avelao aho hikasika ireo tetikasa malaza.
NMN Miaro ny fahatanorana
Hatramin'ny 2013, Dr. Sinclair dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fandalinana ny Nicotinamide Mononucleotide fanampin-tsakafo sy ny anjara asany amin'ny maha suplementement anti-anti-age. Tao amin'ny taratasim-pikarohany, nanamarika ilay mpandinika génétika fa ny fitsaboana dia nanatsara ny fahaizan'ny hozatra sy ny metabikan'ireo modely totozy. Dr. Sinclair dia nampitaha ny fahombiazan'ny NMN amin'ny fanatanjahan-tena.
Tamin'ny alalàn'ny fikarohana, ity geneticista Harvard ity dia tsy nandrakitra ny vokam-baravarana fanampiny NMN.
Andraikitra miaro amin'ny cardio amin'ny NMN
Ao amin'ny fikarohana fanampiny NMN tamin'ny taona 2014 dia nanapa-kevitra i Yamamoto sy ireo mpiara-miasa aminy fa manana fananana fiarovana amin'ny kardio ny NMN. Ny fitantanana ny fanampiny dia hiaro ny fo amin'ny fanaintainana sy ny ratra ischemic.
Roa taona taty aoriana, hitan'i De Picciotto sy ireo génétistaista namany fa afaka mampiroborobo ny fampiasana vascular ny NMN.
NMN Miady amin'ny Neurodegeneration
Tamin'ny taona 2015, Long sy ny ekipany dia nanamarika fa ny supplement NMN dia afaka mitsabo ny Alzheimer ary mampihena ny soritr'aretina ratsy. Herintaona taty aoriana, dia nanatsoaka hevitra i Wang sy ny ekipany mpahay siansa fa ny fitsaboana dia manohitra ny aretim-pinoana sy ny fahantrana amin'ny fo.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny mpahay siansa fikarohana fanampiny NMN dia tonga nanohana ny fahombiazan'ny Nicotinamide Mononucleotide amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny kognita.
NMN Mampiroborobo ny fiasa ara-tsaina sy immunological
Tamin'ny 2013, fantatr'i Mills sy ny ekipany fa ny nikotinamide mononucleotide (NMN) dia afaka mitantana diabeta karazana II. Telo taona taty aoriana dia napetrany fa ny famenon-tsakafo dia manohitra ny fihenan'ny vatan'ny totozy sy ny fahasalamana amin'ny totozy taloha. Tamin'io taona io ihany dia niara-niasa tamin'i Yoshino sy Imai i Mills mba handinika ny fiantraikan'ny NMN amin'ny vaskularity sy ny anjara asany amin'ny adin-tsaina oxidative.
NMN Transporter mistery
I Imai sy ny ekipa biochemista dia nahita Slc12a8, izay manampy amin'ny fampidirana an'i Nicotinamide Mononucleotide ao anaty vatana. Haingana ity dingana ity ary tsy dia misy fiantraikany firy amin'ny tsy fahampiana NMN.
Hatramin'ny taona 2017, ny manam-pahaizana avy amin'ny Keio (Tokyo) sy Washington University dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fitsapana ara-pitsaboana NMN teo amin'ireo lohahevitra efa lehibe fa salama.
Ny tanjon'ny fitsapana olombelona dia ny hametraka ny fiarovana ny nicotinamide mononucleotide ary ny fahatakarana ny fiantraikan'ny fametrahana amin'ny sela beta-cell. Ankoatr'izay, ny mpikaroka mpikaroka dia te hahafantatra raha misy izany Ny fiantraikany amin'ny NMN.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Fatra
Angamba ny fanontaniako ao an-tsainao dia ny hoe: "Firy ny NMN tokony horaisiko?" Eny ary, avelao aho handrava azy aminao.
Dosis NMN mahazatra ho an'ny olombelona dia eo amin'ny 25mg sy 300mg isan'andro. Mandritra ny fitsapana rehetra misy eo amin'ny fitsaboana, dia mahatratra 250mg / andro ny lohahevitra.
Ny Dr. Sinclair dia miaiky fa maka 750mg eo ho eo isan'andro izy. Raha mikasa amin'ny alàlan'ny famerenam-bidy fananganana NMN an-tserasera ianao dia ho hitanao fa misy mpampiasa sasany hiakatra 1000mg / andro. Na dia tsy misy firaketana fantatra momba ny fiantraikany amin'ny nikotinamide mononucleotide dia tokony hifikitra amin'ny faran'izay ambany indrindra ianao.
Azo antoka ve i Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Hatreto dia mbola tsy misy angona hiampangana an'i Monotucleamide Nicotinamide ho tsy azo antoka. Avy amin'ireo firaketana navoaka nandritra ny fitsapana ara-pitsaboana dia tsy nisy lohahevitra nanoratra ny vokadratsin'ny monotucleamide nicotinamide. Inona koa no nahombiazan'ny fandalinana prélinika nefa tsy nisy soritr'aretina ratsy.
Koa satria tsy nahazo fankatoavana feno avy amin'ny FDA ny mononucleotide nicotinamide, dia tsy azo atao fanafody izany. Na izany aza, azonao atao ny mandray azy a sakafo fanampiny.
Na dia hitanao any amin'ny fivarotana zava-mahadomelina eo an-toerana aza izany, ny toerana mety indrindra hividianana ny vokatra dia amin'ny Internet. Azonao atao ny mividy vovon-tsakafo nicotinamide mononucleotide ho an'ny fikarohana ataonao na mandeha amin'ny famenon-tsakafo. Na izany aza, alao antoka fa miantsena amin'ny mpamatsy mononucleotide legit beta-nikotinamide ianao.
Mba hampitomboana ny bioavailability NMN, aleonao ny pilina sub-lingual fa tsy ny takelaka am-bava.
Araka ny fenitry ny FDA, ny olona iray dia mila 560mg farafahakeliny an'ny Nicotinamide Mononucleotide isan'andro. Ny tokony ho fantatrao dia ny broccoli sy ny laisoa no manao fisoratana anarana ambony indrindra amin'ny NMN raha oharina amin'ny sakafo sy voankazo hafa.
Ohatra, ny broccoli dia misy eo anelanelan'ny 0.25mg sy 1.12mg ny simika. Noho izany, raha te hihazona toe-pahasalamana salama ianao ary manaraka ny fepetra takian'ny FDA dia tsy maintsy mihinana broccoli 1500 pounds ianao ao anatin'ny iray andro. Koa satria tsy azo atao mihitsy ny manao izany, dia tokony hisafidy ny hividy ny famenony amin'ny mpamatsy beta-nikotinamide mononucleotide ianao.
Yao, Z., et al. (2017). Ny Nicotinamide Mononucleotide dia manakana ny fampiatoana an'i JNK hiadiana amin'ny aretina Alzheimer.
Yoshino, J., et al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, Key NAD (+) mpanelanelana, hikarakara ny pathophysiology amin'ny diabeta sy ny diaben'ny tazomoka amin'ny voalavo. Cell Metabolism.
Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, mpanelanelana amin'ny NAD + Sintesiana, miaro ny fo amin'ny Ischemia sy ny reperfusion.
Wang, Y., et al. (2018). Ny famatsiana NAD + dia manamaivana ny fiasa lehibe amin'ny Alzheimer sy ny fanimbana ny ADN amin'ny modely maoderina AD AD misy ny tsy fahampian'ny fanamboarana ADN.
Keisuke, O., et al. (2019). Ny fiantraikan'ny Metabolika NAD Miova amin'ny tsy fahaleman'ny metabolika. Gazety momba ny siansa biomedika.
1.Nahoana Isika no mila an'i Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
2.Inona no atao hoe Mononucleotide Nicotinamide (NMN)
3. Inona avy ireo sakafo misy Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
4.Inona no tombotsoan'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
6.Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Fikarohana
8.Ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN) dia azo antoka
9. FanampinyNicotinamide Mononucleotide (NMN)